Indlela yokwenza umfana athandane | Amadoda anesitayela
Ungenza kanjani umfana athandane
U-Alicia tomero | 29/10/2021 20:34 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Izithandani Nezocansi
Yeka umuzwa omuhle thandanani futhi uzizwe ubuyiselwa. Uma unqume ukwenza konke futhi ucabanga ukuthi kuwumsebenzi oyinkimbinkimbi, akufanele uphonsa ithawula. Uma ucabanga ukuthi akukho ongakwenza futhi unqume ukuhlehla, khona-ke ngeke uthole lutho. Kufanele ugcine leyo nkohliso futhi wazi ukuthi ungamenza kanjani umfana othandweni.
Kodwa uma uthatha isinqumo sokumthola enempilo ngazo zonke izindlela, kuzomele wenze konke okusemandleni akho futhi ziveze njengoba unjalo, ukuze kungabikho ukukhohlisa. Uma ungenangqondo ungakwazi bheka elinye iqhinga, Kodwa uma uzama ukumthola ngokuzenza ongeyena, kusuka lapha sincoma ukuthi akuyona indlela engcono kakhulu.
1 Zinakekele futhi unikeze ukubaluleka komzimba wakho nempilo yakho
2 Hlala njalo ugcine amavayibhu amahle futhi umamatheke kaningi.
3 Ngaso sonke isikhathi ngifuna ukusondelana ukuze wenze umfana othandweni
4 Bonisa ukuzimela kwakho
5 Thola okuncane mayelana nobuntu babo
Zinakekele futhi unikeze ukubaluleka komzimba wakho nempilo yakho
Lona umbono wokuqala futhi obaluleke kakhulu, nakuba kubonakala kunonya, wonke umuntu ubheka kuqala umzimba womuntu. Kodwa kude nakho konke lokhu kungakhathaliseki ukuthi unamuphi umzimba, futhi akudingekile ukuba libe eliphelele kakhulu.
Kumele umbono wokuqala omnandi, bonisa umzimba onakekelwa kahle, ongenakho ukuntula noma ubudlabha. Isibonelo ngu-a izinwele zilungiswe kahle futhi zilungisweUkuthi umzimba wakho ubonisa inhlanzeko yomuntu siqu, ngisho namakha amancane kuhle. Uma usebenzisa i-makeup ungayisebenzisi kabi, sebenzisa okwemvelo kakhulu. Lapho ugqoka kufanele ube ngokwemvelo futhi ube njalo izingubo ezihlanzekile, ezi-ayiniwe futhi hhayi ama-scruffy. Uma unanoma yiziphi izimfanelo zomzimba ongazigqamisa, ungakwenza ngokugqoka izingubo ezi-sexy, kodwa ngaphandle kokulayisha ngokweqile ukubukeka.
Hlala njalo ugcine amavayibhu amahle futhi umamatheke kaningi.
Njalo ukumamatheka okuhle ngathi futhi futhi akudingeki wenze umzamo omkhulu. Ukubona umuntu emamatheka ngokwemvelo kunikeza ukuzethemba futhi izodala ukufinyeleleka okukhulu nokuxhumana phakathi kwabantu ababili.
Enye yezimfanelo abafana abathanda kakhulu ukuyibona intombazane enobudlelwane esondelene nabanye. Ukuthi ubuntu bowesifazane buhlotshaniswa nokuzijabulisa nakho kuthandwa kakhulu. Hlala uthintana naleyo ndoda, khuluma nayo, imamatheke futhi ngaphezu kwakho konke ujabulele isikhathi futhi ujabule. Konke lokhu ngaphandle kokuphoqelela isikhathi kuzodala ukukhanga okuhle.
Ngaso sonke isikhathi ngifuna ukusondelana ukuze wenze umfana othandweni
Kumele yenza intshisekelo yakho nokusondelana kwakho kuzwakale, kodwa ungabonisi okuningi kokuchotshozwa kwakho okukhulu. Uma unosuku kufanele ube ngokwemvelo futhi ulandele intambo yengxoxo, qaphela lokho elikushoyo futhi khombisa konke ukusekela kwakho. Kufanele udale indawo ethule lapho kufanele uzizwe ukhululekile. Ungazibonisi noma umenze abone zonke izimanga onazo, ukudala i-halo yemfihlakalo nakho kuzodala intshisekelo.
Ukuze udale ukukhanga okuncane, kuzodingeka futhi ubonise ukuthi ingxoxo yakho ayiyona nje ubungane. Uzomyeka awe lokho onakho okunye okuthakazelisayo ngalawo ma-nuances amancane ukukufakazela. Ukuxhumana ngokomzimba nakho kuyasebenza, kodwa ungalinge ulithinte kakhulu ngoba akhona amadoda alayo.
Sebenzisa indlela yesibuko ukuze kube khona ukukhangwa. Uma lowo mfana ebona ukuthi wenza ukuthinta okufanayo, uziphatha ngendlela efanayo, unokukhathazeka noma imizwa efanayo ... ukunaka kanye nentshisekelo yalowo wesifazane. Kodwa kufanele uqaphele ngalesi sici, ungaba seduze nalowo muntu, kodwa ungadali ubuntu obungamanga. Lokho kuzogcina kutholakele.
Bonisa ukuzimela kwakho
Leyo imininingwane oyithanda kakhulu futhi engakha ukukhanga okuningi. Ungakhombisa intshisekelo yakho emadodeni, kodwa ungabonisi okunamathiselwe kwakho. Kukhona abesifazane abathembele ekuthandeni okuthile nasekunamathiselwe ukuze bazizwe begcwalisekile. Kodwa ngale kwalokhu ngokoqobo, amadoda akhetha abesifazane ababonakala qina futhi uzimele.
Ukuze ukwazi ukukhombisa ukuthi ukuzimela kumele kuzwakale, dala eyakho impilo futhi ujabule unganciki kunoma ubani. Ungamfuni njalo, myeke naye akufune futhi awutholakali noma nini. Kufanele futhi bahlele izinhlelo nomndeni nabangane futhi benqabe noma yisiphi isimemo ngoba unempilo yakho. Yonke le mininingwane, ngisho noma ingabonakali, ibala kakhulu.
Thola okuncane mayelana nobuntu babo
Lena imininingwane enhle yokwenza izikhathi ndawonye zabiwe ngesasasa elikhulu. Uma uthola ukuthi kunjani ukuthanda kwabo, izinto ozithandayo, umsebenzi wakho, okukukhathazayo ... konke lokhu kungaba yinzuzo enkulu kuwe. Kodwa ukwazi kufanele nje ukulalele, njalo myeke akhulume ngaye azizwe ephelezelwa.
Futhi ngaphezu kwakho konke ukuze ukwazi ukuyithatha kahle ngangokunokwenzeka, Ungakhathazeki. Kufanele uphumule futhi uvumele yonke into igeleze ngokujwayelekile futhi ngaphandle kokuxhamazela. Amanye amadoda kufanele anikezwe isikhathi ngakho abazizwa becindezelwe, futhi engasindwa yisimo. Kwenze kwaziwe ukuthi ufuna ukuba naye ngaphandle kokuphoqa noma yini, ukuthi ujabulele ukuba nabo futhi ngaphezu kwakho konke ukuthi unesikhathi esihle. Ngisho, konke makuvele ngokwemvelo futhi ujabulele isikhathi kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ungenza kanjani umfana athandane
Igazi emchameni emadodeni